Ikhtiyaarka cusub ee Hi-Fi iyo jiilka saddexaad ee AirPods, si dhakhso leh sida ay sheegayaan wararka xanta ah. Waxaan ka socdaa mac
Xulashada Cusub ee Hi-Fi iyo XNUMX-da Gen AirPods ee Goordhow Imaanaya Sida ay Xanta Yeelatay
Xanta ayaa duuleysa. Kuwa leh Apple ayaa dhowaan soo saari doonta nooca saddexaad ee AirPods. Sameecadahaas smart-ka ah, ee wireless-ka ah ee suuqa wax ka beddelay. Waqtigan xaadirka ah ma jiro qof wadada la maraya Apple ama nooc la mid ah. Xanta ayaa sii kordheysa waxayna yiraahdaan waxaan ku dhownahay inaan soo bandhigno noocyadan saddexaad laakiin sidoo kale waa in lagu daro waxqabad cusub: Ikhtiyaar cusub oo Hi-Fi ah.
Waxaan maqalnay in mudo ah in jiilka seddexaad ee Airpods ay durbaba aad ugu dhow yihiin in la bilaabo. Waa run in loo saadaaliyey bisha Maarso iyo xitaa dhacdada Apple ee Abriil. Waxba ma jiraan. Waqtigan xaadirka ah waxaan sii wadaynaa jiilka labaad ee sameecadaha asalka ah ee Pro iyo Max. Laakiin xanta ayaa sii xoogeysaneysa, Taasi waxay ka dhigan tahay inaan dhowaan arki karno jiilkan saddexaad ee sida aad ku aragto sawirka maqaalkani u eg yahay Pro.
Sida laga soo xigtay laba ka mid ah warbixinno kala duwan, Apple waxay ka shaqeyneysaa oo kaliya jiilka saddexaad ee AirPods, laakiin sidoo kale kor u qaadista wanaagsan ee tayada codka ee Apple Music, sidoo kale. Apple waxay u maleyneysaa inay soo bandhigeyso AirPods cusub iyo heer cusub oo Hi-Fi ah oo loogu talagalay Apple Music "toddobaadyada soo socda." Tan waxaa lagu xaqiijin karaa lambarka laga dhex helay beta-ka ee iOS 14.6 oo soo jeedinaya heer cusub oo Apple Music ah.
Apple ayaa laga yaabaa inuu sugo ilaa Shirka Sannadkan ee Horumarinta Adduunka, in la qabto horaanta Juun. Had iyo jeer waa dhacdo software-culus, laakiin Apple ayaa ku dhawaaqday qalab hore. Marka waxaa laga yaabaa inay taasi tahay markaan aragno dhagaha dhagaha. In kasta oo aad iyaga bilaabi karto markasta oo aad rabto oo ay weheliso war-saxaafadeed. Ka dib oo dhan, tani waa cusbooneysiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Xulashada Cusub ee Hi-Fi iyo XNUMX-da Gen AirPods ee Goordhow Imaanaya Sida ay Xanta Yeelatay
Haddii aad rabto inaad u shaqeyso Apple, ka hubi boggooda cusub